အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: အောင်စာရင်း...
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:50 PM
ဝေးးးး ဂုဏ်ထူးတစ်ဘာသာထွက်တယ်ကွ ! ဒါပေမယ့် မေးတဲ့ သူကိုယ်တိုင်က သူ့အဖြေကို ပြန်စစ်ခိုင်းနေတယ်။ ဘယ်လိုဆရာပါလိမ့်???
နောက်တာနော် အောင်စာရင်းလေးကမိုက်တယ်ဗျာ မေးခွန်းမေးတဲ့လူပဲဗျာ အောင်မှာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား?
ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ရဘူး တရားသဘော နဲ့ပဲ
ကြည့်ရမယ်...။ဟီး နောက်တာ ချစ်ခြင်း တရား
တခု ထဲ ကြည့်မယ်..သာမန် ပုထုစဉ် လူသား တယောက်အနေ နဲ့ ဆိုရင် တော့ ညီလေး ပြော
တာ မှန်ပါတယ် ကွယ်..။
ဒါကြောင့် ဦးဦး တို့ မြန်မာ့ အသံ က ဒီတပါတ်
အတွက် မေးကြည့် ဖြေကြည့် ကဏ္ဍလေး မှာ
အဖြေ မှန်သူ များ ကို အထူး မှတ်တမ်း တင်အပ်
အစ်ကိုရေကျွန်တော်ကတော့ All D ပေးတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ဝယ်ကျွေးတော့။ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးထွက်လို့။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝယ်ကျွေးရမှာစိုးလို့ ဂုဏ်ထူးပေးလိုက်တာ။ :P နောက်တာနော် အစ်ကို
အောင်သင့်တဲ့ အမှတ်တွေနဲ့ ကျော်နေတယ်လေ ကိုယ့်ဆရာ အောင်စာရင်းထွက်တယ်ဆိုပြီး အောင်လား ကျလား ပြန်မေးနေတယ်နော်။ ကျတာမကောင်းဘူး ရတ်ဘတ်နာတယ် အစ်ကိုရ ။
:D H1Bro :)
အောင်စာရင်းလေကွာ ကျစာရင်းမှ မဟုတ်ပဲ ငါ့သယ်ရင်း အောင်တယ် :D မေးခွင်းတွေတော့ မသိ အဖြေနဲ့တင် တော်တော် သဘောပေါက်သွားပီ။ သီအိုရီတွေ ဖလော်တွေက မြင့်တယ် :)
အောင်စရင်း မှာ ငါလဲ ပါဘူး ။။
ရဘူးကွာ... အိမ်မက်မည်းကြီး ...
ကိုယ်.ဘာသာကိုယ် ဂုဏ်ထူးထွက်ပလိုက် ပြီ ။။
ငါကွ.... ပေါက်ကရ .. ပိာပီာ
အောက်ဖော်ပြပါ အဖြေများဖြင့် ထက်ကြပ်မကွာ တူပါက (ထုံးစံအရ) အောင်ပါတယ်။ (ဂုဏ်ထူးထွက်ရုံတင်မက အမှတ်ပင် ပြည့်နိုင်သည်။)
S-Ray တပ် ကြည့်ပါ။
အမည်းရောင်ကို အဖြူရောင်ထိုးသော်လည်း မည်းနေမှာပါ။
စိတ်နှင့် ခံစားချက် အချို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုအချို့ တော့ ရှိပါတယ်။
Phenylethylamine ပမာဏ တိုင်းပြလိုက်ပါ။
S-Ray တပ်ရင် အဆင်ပြေပေမယ့် တခါတလေကျတော့လည်း စက်ပျက်နေတတ်တယ်။ (သိသလောက်ကတော့ အချိန်နဲ့ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။)
သက်ရောက်မှုကား အမြဲ ရှိ၏။ မည်သည့်အသွင်ဖြင့် သက်ရောက်မည်ကိုတော့ တွက်ဆရန် မလွယ်ကူပါ။
Tears Cycle is perfect.
ပိုမိုတိကျစေရန် အချိန်ဖြင့် မတိုင်းတာမီ စစ်မှန်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ (ဆန္ဒဖြင့် မရောထွေးစေရန် ဖြစ်သည်။)
Black Dream ပြောသလို ညီမျှခြင်း တစ်ဖက်မှ စတင်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ နားလည်စေနိုင်ပါတယ်။